မာန်တခုပင်။ရဲရင့်စကားစမပြောရဲ။ဘုတောလျှင်ဒုက္ခ။''မောင်းလေ''နားထဲအသံတခုဝင်လာသည.် front view
ကမဲမဲဝမိန်းမကြီးကိုပေးလိုက်သည်။17 ဆိုသည့်စာလုံးနီနီပေါ်လာသည်။airport parkingတိုင်းဈေးကြီး
ကနေဒါဆောင်းကပန်းနှင်းဆီကိုအပြုံးနှင့်ဆီးကြိုလိုက်သည်။( toronto Pearson airportကနေtorontoမြို့
ထဲကိုtaxiခကပုဒ်ပြတ်$50အိမ်အရောက်ပို့ပေးသည်။129busစီးလျှင်$3ကျသည်။ုkipling subway station
နေခဲ့ပြီးကနေဒါwinterကြောင့်ဖြစ်မည်။Room heater နဲနဲတင်ပြီးလေ၀င်လေထွက်ကောင်းအောင်မှန်နဲနဲ
လေးချပေးလိုက်သည်။.........ရဲရင့်နေသည့် Building ..underground
Winsor University နှင့်သူတက်နေသည့်ကျောင်းက Partnership လုပ်ထားသည်..၆လတက်ပြီးလျှင်
နေ့ခင်း၁နာရီမှာပူတူးနိုးလာသည်။နှင်းလည်း ရှင်းလောက် ပြီ။ရန်ကုန်မှာဒီအချိန်ဆိုည၁၂ လောက်ရှိမည်။
မတတ်နိုင်အခု လောက်ဆိုဖိုးညီ တို့စိတ်ပူနေလိမ့်။ရဲရင့်ဖုန်းခေါ်၍ပူတူးနှင့်ပေး ပြောလိုက်သည်။
အထပ်ရှိFood court တွင်နေ့လည်လွန်စာဆင်းစားသည်။သူရှင်းမည်ဟုပူတူးကပြောသည်။''ချမ်းသာမှန်းသိပါ
ယောက်တည်းရေခြားမြေခြားလွှတ်ရဲခြင်းဖြစ်မည်။စားပြီးတော့Food court ဘေးရှိWash roomကိုညွန်ပြလိုက်
သည်။ကားဆီပြန်လာပြီးyonge street အတိုင်းsouthဘက်ကိုဦးတည်လိုက်သည်။yonge streetသည်ကမ္ဘာ
်FIDO prepaid card သုံးဖုန်းနီနီလေးတလုံးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးသည်။Mcdonald တွင်နေ့လည်စာစားပြီး
အခန်းပြန်ရောက်တော့Set up ၀ိုင်းလုပ်ပေးသည်။ညနေ၄နာရီထိုးတော့ပြန်မည်ဟုပြော၍အပြင်ထွက်ခဲ့သည်။
အဖြူအဖိုးကြီးက''this is my country.''ဟုပြောသည်။မက်ဆီကိုအဖိုးကြီးကအချက်ကျကျပြန်တွယ်သည်။
ရဲရင့်ပြင်သစ်လိုမတတ်မှန်းသေချာမှအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောသည်။ကွိဘက်မှရဲရင့်တို့အလုပ်တွင်part time လာလုပ်
သောကောင်လေးက''I just visit to Canada."ဟုရဲရင့်ကိုပြောသည်။ကွိဘက်၏အနောက်ဖက်တွင်ရဲရင့်တို့Ontarioပြည်နယ်ရှိသည်။အရှေ့ဖက်အခြမ်းသည်
''ပူတူးဖျားလို့ESL Class ဒီနေ့သွားမတက်ဖြစ်ဖူး".....သူယူထားသောဘာသာရပ်အ
ပြင်English in Second language ကိုပါတက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ကနေဒါရောက်လာ
သည။်International studentတိုင်းHealth and dental Insurance ၀ယ်ကြရသည်။
တယောက်ဟုအတ္တကြီးစွာဖြေသည်။U.F.T(University Of Toronto)သို့ပြောင်းခွင့်ရရန်
ိသည်။summer ရောက်တော့ကမ္ဘာကျော်နိုင်ရာဂယာရေတံခွန်၊North Americaတွင်အကြီး
သောကြာနေ့ညနေေ၇ာက်တော့DANDUS & BAY ရှိ GRAYHOUND BUS terminal
စာစားရန်စီစဉ်ပေးသောအခါပူတူးက ''မစားတော့ဖူးအကို...york university ကသူငယ်ချင်း
တွေကိုတွေ့ဖို့ပြောထားတယ်...အဲဒါ..သူရမှာစင်္ကာပူကပါတဲ့International licence ရှိတယ်၊
ပူတူးမျက်နှာလေးကိုစေ့စေ့ကြည့်ပြီးကားသော့နှင့် Insurance ပေးလိုက်ပါသည်။navigator
ချက်ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ကွာ....''၊.........''Sir...We are closing now..''Emm..What time"'
''Two o'clock sir..''....2 to 11 AM Ontario ပြည်နယ်တွင်အရက်ရောင်းခွင့်မရှိပေ။
ချစ်တခုနှင့်နှစ်ယောက်စာလုံလောက်သည်။University of Toronto ကရဲရင့်နေရာမှလမ်းလျှောက်၍သွားလျှင်
သေးသည်။York University ကaviable တဲ့ ပျော်လိုက်တာ..အဲ..ဝေးတော့ဝေးသည်။မြို့ပြင်မှာ..။တယောက်
ဂက် ဂက် ဂက် ...............၊၊
တိုရန်တိုနှင့်အနီးဆုံး Beach မှာWasaga Beachဖြစ်သည်။ဒါတောင်ရေချိုဖြစ်သည်။
Newfoundland အထိသွားလျှင်တော့ရေငံ beach တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။အလုပ်မှ
''အတင်းရုန်းသည်၊''ပြန်မယ်..ပြန်မယ်..တိုရန်တိုပြန်မယ်အခု..''.. .. ..စကားသံ
မယ်...အကိုတို့ဒီမှာcity hall မှာလက်ထပ်မယ်လေ...''ပူတူးကဆိုးတယ်အကိုသီးခံပေးပါနော်..
ရေကူးပြီတော့နေ့လည်စာစားပြီးWasagar ရေလည်ကျွန်းသွားလည်သည်။ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်တာပြ သည်။စစ်အတွင်းသုးံသောလှေကြီးမြစ်ထဲမှဆယ်၍ပြထားသည်။တချိန်လုံးလက်မောင်လေးကိုချိတ်ပြီးလိုက်
တနေ့အလုပ်ကပြန်တော့ပူတူးOnline Talk နေသည်နာမည်ထဲ့ပြောတတ်သောသူ့အကျင့်ကြောင့်သူရ..
တာတယောက်မှမရှိဖူး..မနိုင်လို့အဲဒီပို့လိုက်တာ)''အောင်မငှီး..ဖိုးညီရယ်....USA တို့Ausi တို့ပို့ပါလားဟာ
ဒီတခါတဆင့်ပို၍ VZO ပါဖွင့်ထားသည်။computer ကြီးကိုသွားကိုင်ပေါက်ပစ်လိုက်ချင်သည်။
(416.-- - .- - - -)စကားပြန်ဖုန်းနံပါတ်လေ...ခဏနေတော့စကားပြန်ရောရဲ၂ယောက်ပါရောက်လာသည်။
အခြားတခုကတော့ပြည်သူကအချစ်တော်နအဖဖြစ်သည်။ ။ ဤအချစ်နှင့်အမုန်းနှစ်ခုကြားတွင်ခေတ္တအသက်ရှင်သည်။ ။}}}}}}
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါစေရှင်.. စာတွေအများကြီးလည်းဆက်ရေးနိုင်ပါစေ...ဒီပိုစ်လေးဖတ်ရတာ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်မို့ထင်တယ် စာဖတ်သူတောင် ခံစားသွားရပါတယ်။ တကယ့်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းဘူးရှင်..။
ရင်တောင်မောသွားရပါတယ် ကိုရဲရင့်ရယ်..ဒီလိုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၀၄ ကတည်းကသိခွင့်ရခဲ့ရင်ကောင်းပါတယ်.. တနေ့ကျရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. လက်တွေ့ကိုရေးသားထားတယ်လို့ ခံစားမိလိုက်ပါတယ်..ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ..မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်... အထီးကျန်ခဲ့တဲ့လူကို ပစ်ပြေးလိုက်မိလို့ပါ.. တောင်းပန်လိုက်ပါတယ် ကိုရဲရင့်.. အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
မြေနီကုန်းနှင့် လှည်းတန်း ဖေါက်ခွဲမှုသည် နအဖအာဏာရှ...